बन्द खाम र समाचारको सौदाबाजी – Shirish News
बन्द खाम र समाचारको सौदाबाजी
चन्द्रकिशोरको घर सर्लाही । बलरामा जन्मिए । उच्च शिक्षा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जबाट लिए । वर्किङ स्टेसन वीरगञ्जलाई बनाए । ३० वर्ष भयो वीरगञ्जमा बसेको । कामको क्षेत्र त पूरै तराई । तर वर्किङ स्टेसनचाहिँ वीरगञ्जलाई बनाइरहे ।
गणितमा उनको दिमाग दाहिने चल्थ्यो । तर कविता लेख्थे । कक्षा ७ मा पढ्दा उनले कविता प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । उपहार पाए महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको खण्डकाव्य ‘मुनामदन’ ।
देवकोटा, भूपि शेरचन, मबीबी शाह, लेखनाथ पौडेलका कविताले उनलाई मोहित पारेका थिए । तिनै कविता पढेर त्यसकै सेरोफेरोमा आफ्नो भावनालाई उतार्थे । उनी भन्छन्, “बालबालिकाले त्यसै गर्छन्जस्तो लाग्छ । साहित्यमा सानैदेखि रुचि थियो ।”
डाक्टर अथवा इन्जिनियर बनाउने बाबुको इच्छा थियो । आईएस्सी पढे । आइएस्सीपछि तयारीका लागि उनी काठमाडौं पनि आए । आईएस्सी दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए । जग दह्रो भएन । तयारी पुगेन । इन्जिनियर र चिकित्सक दुवैमा असफल भए । बाबुको चाहना अधुरै रहने देखियो । चन्द्रकिशोरमा परिवर्तन आउँदै थियो । साहित्यिक कृतिमा दिलचस्पी झाङ्गिँदै थियो ।
बीएस्सी पढ्दै गर्दा समकालीनहरुसँग मिलेर चन्द्रकिशोरले संस्था खोले ‘ग्राम उत्थान परिषद्’ । अध्यक्ष चन्द्रकिशोरलाई बनाइदिए । ग्राम उत्थान परिषद्ले दुईपटक पत्रिका निकाल्न थाल्यो । सम्पादक पनि चन्द्रकिशोर नै थिए । ०४३ सालतिर फर्किए उनी । पत्रिकाको नाम ‘ग्राम’ थियो । पत्रिका हस्तलिखित हुन्थ्यो । वर्षमा दुई पटक दसैं र सरस्वती पूजामा निकाल्थे । जसको अक्षर राम्रो छ, उसैले लेख्थ्यो । दसैंमा ‘विजया’ र सरस्वती पूजामा ‘वसन्त’ अङ्क निकाल्थे । पत्रिका नेपाली, हिन्दी र बज्जिका गरी तीन भाषामा निकाल्थे । दसैंमा घर फर्किएका पढेलेखेकाहरुलाई र गाउँ पञ्चायतमा लगेर दिन्थे, विनापैसा । साहित्य, विकास र सामाजिक विषयका जानकारी त्यो हस्तलिखित पत्रिकामा समेटिन्थे । राजनीतिक विषयले भने खासै उजागर हुन पाउँदैनथे । कारण राजनीतिक व्यवस्था (पञ्चायत) नै थियो ।
पत्रिका प्रकाशनमा रुचि कसरी जाग्यो ? पृष्ठभूमितर्फ फर्किन्छन् उनी । तराईको जग्गा । सबैतिर समथर । भैंसी चराउन जान्थे । भैंसीको पिठ्यूँमा बोरा ओछ्याएर बस्थे । र, दिनभरि पढ्थे उनी । घरमा बाबुले मोटामोटा किताब राखेका हुन्थे । प्रायः सबै किताब पढ्थे चन्द्रकिशोर ।
एउटा पुस्तक भेटे उनले । पुस्तक थियो हिन्दी भाषामा । समय थियो– एसएलसी दिएको वर्ष । पत्रकारले लेखेको पुस्तक परेछ । त्यसमा लेखिएको थियो– हस्तलिखित पत्रिका कसरी निकाल्ने ? समाचार कसरी लेख्ने, पत्रकार र पत्रकारिताले समाज परिवर्तनमा खेल्ने भूमिका । सँगै थियो एक पत्रकारको जीवनी पनि । जीवनी थियो– पत्रकार गणेश शङ्कर विद्यार्थीको । उनी भारत कानपुरका प्रतिष्ठित पत्रकार थिए । ‘प्रताप’ उनको पत्रिकाको नाम थियो ।
भारत स्वतन्त्र हुनुअघि उनले सरकारी दमन सहेर स्वतन्त्र भारतको पक्षमा पत्रिका निकाल्थे । जब कानपुरमा हिन्दू र मुस्लिमको दङ्गाफसाद भयो । उनले सम्पादकीय, लेख र समाचारको काम त गरिरहेका थिए नै, सँगै सडकमा पनि आए । सडकमै उत्रिएका उनी आन्दोलनमा मारिए ।
उनको त्यो जीवनी चन्द्रकिशोरको दिमागमा टाँसिएर बस्यो । उनले निष्कर्ष निकाले– जीवन त यसरी पो अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ । पत्रकारले जे भन्छ त्यो गरेर पनि देखाउनुपर्छ भन्ने उनको अमिट बुझाइ रह्यो ।
नेपालमा पञ्चायत थियो । केही न केही आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । भारतमा हिन्दू र मुस्लिमबीच दरार थियो । नेपालमा पहाड र तराईबीच । सामाजिक समाञ्जस्य हुनुपर्छ भन्ने थियो । भारतमा हिन्दू र मुस्लिमबीच समाञ्जस्य नहुँदा जसरी स्थिरता र आर्थिक उन्नति भएको छैन त्यस्तै नेपालमा पनि पहाड र तराईबीच समाञ्जस्य नहुँदा नेपालले अग्रगति लिन सक्दैन । तराई र पहाडबीच बृहद् अन्तरक्रिया गराएर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ र यसका लागि पत्रकारको रोल महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उनी सोच्थे । त्यही उद्देश्यले पत्रिका निकाल्न थालेको अतीत सुनाउँछन् उनी ।
बीएस्सी पढ्दै गर्दा साहित्य र दर्शनले उनी लपक्कै भइसकेका थिए । भारतीय युवा स्वामी विवेकानन्दको ठूलो प्रभावले उनलाई समेटिसकेको थियो । चन्द्रकिशोर विवेकानन्दको संस्था रामकृष्ण मिसनको प्रभावमा परे । उनले निर्णय गरे– म सन्न्यासी बन्छु । पत्राचार गरे ।
तर सधैं जिन्दगीमा सीधा बाटोमात्रै कहाँ भेटिन्छ र ? कहिले उकाली ओराली त कहिले नागबेली यात्रा । घरको जेठो छोरो । पारिवारिक जिम्मेवारी थियो । परिवारको दबाब थियो । सन्न्यासी बन्ने रहर जिम्मेवारीले लुट्यो ।
बीएस्सी पढ्दा उनले ‘गोरखापत्र’मा सम्पादकलाई चिठ्ठी लेख्न थालेका थिए । वीरगञ्जको ‘प्रतीक’ पत्रिकामा समसामयिक विषयमा झटारो हान्थे ‘कटुमधु’मा । कविताहरु छाप्थे । काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने ‘समीक्षा’, ‘चर्चा’, ‘समाज’ लगायत पत्रिकामा सम्पादकलाई चिठ्ठी लेख्थे । पत्रपत्रिकामा साइनो लगाउँदै गए ।
०४६ सालको राजनीतिक जनआन्दोलनपछि चन्द्रकिशोरले व्यावसायिक पत्रकारिता सुरु गरे । ‘प्रभातवाणी’ साप्ताहिकमा सम्पादक भएका थिए । त्यही क्रममा वीरगञ्जमा उनको भेट भयो सुरेन्द्र सापकोटासँग । सुरेन्द्र ‘देशान्तर’का बजार प्रवद्र्धक थिए । उनले चन्द्रकिशोरलाई जोडे ‘देशान्तर’सँग । समाचार पठाउन सुरु गरे उनले । काठमाडौंका पत्रिकामा उनले स्थान पाए ।
सँगै उनी लेख्थे ‘राष्ट्रपुकार’ र ‘पुनर्जागरण’मा पनि । ‘देशान्तर’मा काम गरिरहेका थिए । एकभन्दा धेरै पत्रिकामा काम गर्न पाइँदैनथ्यो । तर समाचार हुन्थे । लेख्न मन लाग्थ्यो । त्यसैले उनी छद्म नाम प्रयोग गर्थे । र, समाचार लेख्थे । ‘युग सम्भव’ र ‘तरुण विप्लव’ उनले आफूले लेखेको छद्म नाम सम्झिए ।
‘देशान्तर’मा छापिएको समाचार उनले सम्झिए । सद्भावना पार्टीको महाधिवेशन भएको थियो वीरगञ्जमा । पार्टी विभाजन भएको थियो । उनले समाचारसहित गजेन्द्रनारायण सिंहको अन्तरवार्ता पनि लिए । उनले अझै पनि नबिर्सिएको प्रारम्भिक समयको समाचार थियो त्यो ।
जिम्मेवारी र पत्रकारिता
‘हिमाल खबर पत्रिका’मा उनले पहिलो दिनबाटै रिपोर्टिङ गरे । भोजपुरी, मैथिली र हिन्दी भाषाका पत्रिकामा पनि काम गरे । कुनैमा रिपोर्टर त कुनैमा सम्पादक ।
सङ्घर्षका दिन थिए । पिठ्युँमा जिम्मेवारीको अग्लो भारी थियो । दुईजना भाइलाई पढाउनु थियो । तर न्यून पारिश्रमिक अपुग थियो । त्यसैले उनी ट्युसन पढाएर अभाव टार्थे ।
अभावले चन्द्रकिशोरलाई चौधरी ग्रुपको मेघा उलन मिल्समा पनि पुर्‍यायो । त्यहाँ रहँदा आर्थिक उपार्जन त गरे नै अर्को सुविधा पनि उपभोग गरे । अधिकांश पत्रपत्रिका आउँथे । पढ्न पाए । सर्वसाधरणको पहुँचमा विरलै आइपुग्ने टेलिफोन उपभोग गर्न पाए । त्यसले उनको पत्रकारितालाई सहयोग नै गर्‍यो । “जुन दिन मलाई लाग्यो– म पत्रकारिता गरेर बाँच्छु । मैले अरु सबै काम छोड्दिएँ,” चन्द्रकिशोर विगत सुनाउँछन् ।
‘हिमाल खबर पत्रिका’ले उनलाई काठमाडौं बोलायो । तर उनले तराई छोड्न चाहेनन् । तराईका खबर काठमाडौं पठाउन नै चाहे । समाज रुपान्तरणको अहिंसक माध्यम हो र यही नै ठीक छ भनेर सरकारी सेवामा आकर्षित नभएका उनले तराईलाई नै मुख्य कर्मभूमि बनाउने अठोट गरे ।
“पत्रकारले सधैं समाजको डार्क एरियालाई बाहिर ल्याउने हो । त्यसैले म मधेसको कुरा गर्छु, दलितको कुरा गर्छु किनभने नेपालको भूगोलमा त्यो अँध्यारोमा परेको क्षेत्र हो । धेरै उत्पीडित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुखहरुका सूचना नै मैले लेख्ने हो,” चन्द्रकिशोर भन्छन् ।
देश सङ्घीयतामा गइसक्यो । संविधानले अधिकार विकेन्द्रित गरिसक्यो । भलै कानुन बनिसकेको छैन । पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन । तर अहिले पनि काठमाडौंमा काम गरे अग्लो व्यक्ति भइन्छ भन्ने मानसिकता यथावत् छ । चन्द्रकिशोरले अहिले हैन पहिले नै काठमाडौंबाहिर बसेर काम गरे । वीरगञ्ज मात्रै कार्यक्षेत्र थियो । अहिले सम्पूर्ण तराईलाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । वीरगञ्ज वर्किङ स्टेसनमात्रै भयो । देहातमा पुगेर समाचार खोज्छन् । देहातका भुइँमान्छेका वस्तुस्थितिसहितका समाचारले उनलाई काठमाडौंले स्वीकार गरेको छ ।
“काठमाडौंबाहिर बसेर, कसैलाई आरोप नलगाएर, बन्द खाम नलिएर वीरगञ्जमा बसेर काम गर्न बडो गाह्रो थियो,” चन्द्रकिशोर आफू बचेर पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतालाई बचाएर काम गरेको कुरा गर्छन्, “दबाब र खप्की सहन सजिलो थिएन । तर सहेँ ।”
खोज पत्रकारिता केन्द्रमा अध्यक्ष भएको दोस्रो दिन हामीसँग कुरा गर्दैगर्दा चन्द्रकिशोरले त्यहाँबाट पाएको फेलोसिपको कुरा गरे । विषय थियो– वीरगञ्जको भन्सारमा हुने तस्करी ।
वीरगञ्ज भन्सारका तत्कालीन प्रमुख साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति थिए । साहित्यिक अन्तरक्रियामा समय भएसम्म सहभागिता जनाउँथे । क्लियरिङ एजेन्टको अध्यक्ष काशीराज उपाध्याय थिए । उक्त एजेन्टको सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए । एक हजार पारिश्रमिक थियो । काशीराजको ससुराली चन्द्रकिशोरको गाउँमा थियो । त्यसैले काशीराजकी श्रीमतीलाई उनी दिदी भन्न थाले । भलै यिनीहरुले त्यो गाउँ पहिल्यै छोडिसकेका थिए । भावनात्मक नातामात्रै बाँकी थियो ।
चन्द्रकिशोरले स्टोरी सुरु गरे । भन्सार प्रमुख १० बजे अफिस आएपछि कसरी क्लियरिङ एजेन्टका कर्मचारीहरु आउँछन् । कसरी झुकेर ढोग्छन् । त्यसको अर्थ उनले राम्रो आम्दानी मिल्ने ठाउँमा पठाइदिऊन् भन्ने हुन्थ्यो ।
त्योसँगै त्यहाँको लेखा शाखामा कुन दिन प्रहरी, कुन दिन पत्रकार, कुन दिन राजनीतिज्ञ आउने भनेर बार छुट्ट्याएर टाँसिएको थियो । तोकिएको दिनमा गएर बन्द खाम लिएर निस्किने चलन रहेको उनले थाहा पाए । ०५६ सालको कुरा सुनाउँछन् । काशीराजले वैधानिक तरिकाबाट आउने समानमा कति अतिरिक्त शुल्क लगाउने गरिएको छ, उनले भन्दिए ।
चन्द्रकिशोरले सोधेका थिए, “मैले यो छाप्दा हुन्छ ?”
“हुन्छ हुन्छ, किन नहुनु छाप । तिमी छाप्न सक्छौ । छाप्दैनौै, तिमी डराउँछौ । लेख्छौ भने लेख,” काशीराजले उनलाई भने ।
चन्द्रकिशोरले रेकर्ड गरिरहेका थिए ।
समाचार ‘देशान्तर’मा छापियो । ठूलो दबाब पर्‍यो वीरगञ्ज भन्सार प्रमुखलाई । क्लियरिङ एजेन्सीसँग उनी रिसाए । एजेन्टहरु काशीराजसँग रिसाए ।
काशीराजकी श्रीमतीले चन्द्रकिशोरलाई फोन गरेर भनिन्, “तपाईंलाई भाइ मानेको, तपाईंले नै यत्रो धोका दिने ? मेरो श्रीमान्को बिजनेस चौपट हुने भयो ।”
चन्द्रकिशोरले भिनाजुसँग सोधेर नै समाचार लेखेको बताए । त्यो समाचारको ठूलो चर्चा भयो । चर्चामात्रै भएन, काशीराजले मैले बोलेकै छैन भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरे । जब कि चन्द्रकिशोरसँग बोलेको रकर्ड नै सुरक्षित थियो । त्यतिमात्रै पनि होइन, उनले सल्लाहकारको जागिर पनि दिएको र तलब एक हजार दिने गरेको पनि बताए । चन्द्रकिशोरले जागिर छोडिदिए । यो समाचारले उनलाई चिनाएन मात्रै, धेरै कुरा सिकायो पनि ।
मधेसीलाई डोजर हान्दिनु पर्छ…
०६३ मा मधेस आन्दोलन भयो । रवीन्द्र मिश्र बीबीसी नेपाली सेवामा थिए । उनले चन्द्रकिशोरलाई बीबीसीका लागि टिप्पणी गर्न लगाए । चन्द्रकिशोरले भने– मधेस आन्दोलनमा शाही शासनको पक्षमा बसेका केही व्यक्ति सामाजिक सुरक्षाका लागि मधेस आन्दोलनमा छिरेका छन् । उनीहरु मधेस आन्दोलनमार्फत् फ्रेस राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । उनको राजनीतिक विश्लेषण प्रशारण भयो । मधेस आन्दोलन ‘उत्कर्ष’मा थियो ।
वीरगञ्जको घन्टाघर क्षेत्रमा कसैले हल्ला फैलाइदियो– चन्द्रकिशोरले सबै मधेसी पञ्च हुन् भनेर मधेस र मधेसी विरोधी कुरा रेडियोमा गर्‍यो । अरु कुरालाई बिर्सिएर विश्लेषणको एउटा पङ्क्तिलाई मात्रै उद्धृत गरेर र्‍युमर फैलाइयो । उनलाई जुलुसमा रहेका एक व्यक्तिले खबर गरे, “भीडमा तपाईंबारे अफवाह फैलाइएको छ । तपाईं केही दिन बाहिर ननिस्किनुस् ।”
उनले त्यो बेला केही त्रासको महसुस गरे ।
०७२ मा मधेस आन्दोलित थियो । मधेस हेर्ने चन्द्रकिशोर काठमाडौं थिए । उनी कालिकास्थानस्थित एक प्रेसमा पुगे । प्रेसमा आएका एक युवकले भने, “यी मधेसी सबलाई डोजर हान्दिनुपर्छ ।”
चन्द्रकिशोरसँगै अरु पनि थिए । ती युवकले इङ्गित गरेका थिए चन्द्रकिशोरलाई । तर कसैले केही भनेन ।
ती युवा कुनै एक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेछन् । उनले भन्न थाले, “सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश नेता सुन तस्कर, रक्तचन्दन तस्कर हुन्… आदि ।’’
एकछिनमा सबै निस्किए । गेटमा पुगेका चन्द्रकिशोरले त्यहाँ देखे एक जना बुट पोलिस गरेर बसिरहेका मधेसी । उनले सोधे, “तपाईंको नाम के हो ?”
“राजेन्द्र राम ।”
“घर कहाँ हो ?”
चन्द्रकिशोरले मधेसीलाई डोजर हान्दिनुपर्छ भन्ने युवकलाई भने, “कुनै मधेसी नेताको कुरा टेलिभिजनमा सुनेर तपाईंलाई झोक चल्यो । त्यो सुनेर यो राजेन्द्र रामलाई डोजर हान्दा न्याय हुन्छ ? तपाईं अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईंको पार्टी सुन तस्करहरुले कब्जा गरिसके । त्यही पार्टीको मान्छे तपाईंलाई त्यही सुन तस्करीको कुरा सुनेर म तपाईंलाई गोली हानौं ? न्याय हुन्छ ?”
ठीक त्यही यात्रामा साहित्यकारहरुसँग जमघट थियो न्युरोड पिपलबोटमा । त्यहाँ एक जना युवा ओहोरदोहोर गरेर भन्दै थिए, “मधेसीहरुलाई ठीक पार्छु ।”
सबैले बुझे चन्द्रकिशोरप्रति लक्षित थिए ती व्यक्ति । तर सबै मौन ।
एउटाको झोकमा अर्को पर्ने खतरा थियो । त्यही समय उनी जनताको ‘मुभमेन्ट’ जहाँजहाँ हुन्छ, त्यहीँ पुग्थे । जोखिम मोलेर समाचार र टिप्पणीहरु लेख्थे । उनले हैरानी बेहोर्नुपर्‍यो । नेपालभित्रै रहेको एउटा पक्ष र अर्को पक्षबीच संवाद थिएन । असर आमनिर्दाेष नागरिकले बेहोर्नु परिरहेको थियो । त्यसबखत सही बुझाइ र सही सूचनाको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ । यी घटनापछि समाज परिवर्तनको अहिंसक माध्यम पत्रकारिताप्रतिको झुकाव झन् बढेर गयो उनमा ।
बन्द खाम र समाचार
प्रायः धेरैलाई थाहा छ । भन्सारको समाचार लेखेरभन्दा नलेखेर कमाउने पत्रकार पनि छन् । भन्सारको समाचार लेख्ने आसपासमा बस्ने चन्द्रकिशोेरलाई पनि प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न नभएका होइनन् । एकपटक दसैंमा उनीसामु बन्द खाम आइपुग्यो । उनले अस्वीकृत गरिदिए । त्यसपछि उनलाई प्रलोभनमा पार्ने कू–चेष्टा कसैले गरेन ।
“३० वर्षअगाडि पनि म वीरगञ्जमा भाडामा बस्थेँ, आज पनि भाडामै बस्छु,” उनको सादगी जीवनबारे हामीले सोध्यौं । उनले भने, “तराईका बोर्डरमा आर्थिक शक्ति केन्द्रहरु हुन्छन् । अलिकति इमान बेच्यो भने त्यस्ता शक्ति केन्द्र दाहिना हुन्छन् । जीवनशैली फेर्न सकिन्छ । तर मैले त्यो रोजिनँ ।” आज पनि सार्वजनिक गाडीमै यात्रा गर्छन् उनी ।
पत्रकारहरु फेसबुकमा लेखिदिन्छन्, फलानो गाउँपालिका, नगरपालिकामा यस्तो भयो । त्यसपछि सौदाबाजी सुरु हुन्छ । फेसबुकमा आएका ती सूचनाहरु समाचार बनेर आउँदैनन् । “तराईमा अखबारभन्दा धेरै बोली चल्छ,” डगमगाएको प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्छन् चन्द्रकिशोर ।
“जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक शक्ति र भन्सारबीच गठबन्धन हुन्छ । तिनीहरु आफ्नो मूल्यमान्यता र दायित्वबाट चुक्छन् । उत्तरी नाका होस् या दक्षिणी नाका यो प्रवृत्ति आज पनि छ,” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “म सबै यस्ता छन् भन्दिनँ । केही राम्रा र इमानदार पत्रकार पनि छन् । तर यो प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन ।”
समाजले विस्तारै को पत्रकार कस्तो, को खराब र को सही पहिचान गर्न थालेको उनले अनुभव गरेका छन् । तर अहिले पनि तराईमा असल पत्रकारितालाई गलत पत्रकारिताले छोपेको उनले देखेका छन् ।
उनी गम्भीर कुरा गर्छन् । धेरैका लागि अपत्यारिलो । तर चन्द्रकिशोरले भोगे । निष्ठा नगुमाएका पत्रकार चन्द्रकिशोर भएको लेख्थे÷लेख्छन् । सही र गलत छुट्याउँथे÷छुट्याउँछन् । कलम हल्लिँदैन उनको चाहे जस्तोसुकै समाचार होस् ।
तराईको माफिया पत्रकार र छापामार पत्रकारबारे उनले लेखे । तराईकै पत्रकार साथीहरुले उनलाई धम्क्याए, “तपाईं किन माफिया र छापामार पत्रकार भनेर लेख्नुहुन्छ ? कसलाई भन्न खोजेको ? नाम किन किटान गर्नु हुन्न ?’’ तर उनको कलम आजपर्यन्त डगमगाएको छैन । न माफियालाई नजरअन्दाज गर्छन् न भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थानीय तहमा पत्रकार एउटा शक्तिकै रुपमा उदाएको उनको ठहर छ । तराईका गाउँगाउँ घुम्दा चन्द्रकिशोरले देखेका हुन्, स्थानीय निकायले पत्रकारलाई नसमेटी कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । त्यसैले आममान्छेमा पत्रकारप्रति आक्रोश पैदा भएको उनले देखेका छन् ।
नयाँ सडकमा ‘मोफसल’ स्तम्भ लेख्ने चन्द्रकिशोरले नयाँ पत्रिका प्रकाशन सुरु भएपछि ‘तराई चिनो’नामक कोलम लेखे । तराईका विषय उनले उजागर गरे । ‘तराई चिनो’ लेखिरहेकै बेला कान्तिपुरले स्तम्भ लेख्न आग्रह ग¥यो । उनले हार्न सकेनन् । र सुरु गरे ‘डेट लाइन ! तराई’ ।
उनले प्रायः आफ्ना लेखमा ‘ट्रेन्ड एनलाइसिस’ गर्छन् । सरोकारवाला निकायलाई तराई र तराईबासीको अवस्था बुझ्न उनका लेख तथा स्तम्भले सहयोग गर्छन् । सत्ता र शक्तिको नजिक रहेर सूचना लुकाउने आमप्रवृत्ति रहिरहेका बेला त्यसबाट टाढा रहनु उनको स्वभाव हो ।
मधेसका आशा, आकाङ्क्षा र अपेक्षा बढी भए । तराईका अँध्यारा पक्षहरु धेरै छन् । लोकतन्त्रका डार्क एरिया धेरै भयो भने त्यो व्यवस्थाकै लागि खतरा हो । त्यसैले उनी ती पक्षलाई बाहिर ल्याउँछन् । र, त्यसलाई चन्द्रकिशोर आफ्नो दायित्व सम्झिन्छन् । तराईमा बसेर उनले सीमा र मधेसीका कुरा बढी लेखे । सीमावारी र पारीका कुरामा बढी कलम दौडाए । वारी र पारीको सम्बन्धका दूरी–सामीप्यबारे लेखे । तराईका देहातमा पुगेर त्यहाँ जनता जो आफ्ना समस्या राज्यलाई सुनाउन पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्दैन, जो आफ्नो असन्तुष्टि र अभाववारे जानकारी गराउन सम्पादकलाई चिठ्ठी लेख्न सक्दैन, उसको आवाज राज्यलाई सुनाउने सेतु बनिरहेका छन् चन्द्रकिशोर । मधेसको यथार्थ काठमाडौंलाई भनिरहेका छन् । र, भन्छन्, “पत्रकारको नाताले यो मेरो कर्तव्य हो ।” -बाह्रखरी डटकमबाट
कांग्रेसले आफ्नो भूमिका सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ताको लालच देखाउनुहुन्न : रामचन्द्र पौडेल
सन्दर्भ मधेस बलिदानी दिवस : ‘आन्दोलन गर्ने नेता मन्त्री भए। हामीलाई उनीहरूले के दियो ? बरु हाम्रो छोराले ज्यान दियो’
परिस्थितले जीवनमा ल्याएको नयाँ यात्रा लाई स्वभाविक तर चुनौतीपूर्ण रुपमा लिएकी छु : प्रदेश सभा सदस्य बबिता चौधरी
ओलीले संसद बिघटन गरेर नेपाली जनताले सडकबाट लडेर अर्जेको गणतन्त्र माथि प्रहार गर्ने ध्रिष्टता गरे : कांग्रेस महोत्तरीका जिल्ला सचिब पाठक
मैथिली आँगनको चित्र क्यान्भासमा उतार्दै रन्जु